Forex Mt4 Multi Account Manager, Trade Multiple Forex account | FXCC
Home / nyiwe / PC / Multi Account Manager
Ndị ahịa ọkachamara na ọtụtụ akụkọ na ndị njikwa ihe onwunwe chọrọ ngwá ọrụ ndị na-ejikwa ọtụtụ akaụntụ dị mfe ma dị nchebe.
N'ebe a na FXCC anyị na-eme onwe anyị ka anyị nwee ike idozi nsogbu tupu ha ebili. Ọ bụ ya mere anyị ji enye ọtụtụ ndị ahịa ahịa na ego ndị MetaFx MAM (Multi Account Manager) software. MAM nwere uru dị ukwuu karịa ntanetị ndị ọzọ yiri nke MetaTrader Multi Terminal.
Ngwa ngwa FXCC MAM ruru eru maka:
Ndị ahịa ahia ma ọ bụ Ndị Mana Ego na-achọ ịzụ ahịa ọtụtụ akaụntụ MT4 n'otu oge ahụ
Ndị ahịa na-achọ ile ọnọdụ akaụntụ na akụkọ ihe mere eme maka ọtụtụ akaụntụ
Ndị ahịa na-eme ka ndị ahịa na-azụ ahịa maka ọtụtụ akaụntụ
Anyị Multi Account Manager ngwọta na-akwado:
Na-egbu ngwa ngwa, Broker akara & mfe mmelite nkesa site na ihe nkesa ngwa mgbakwunye
Ahịa - Standard na Obere Lot na-akọ maka uru kachasị mma
Mkpuchi anya nke iwu site na mkpochapụ mkpochapụ nke Master
Ụlọ nche windo na MAM
MAM na-enye mgbanwe ndị dị oke mma iji nye onyinye ego:
Mpaghara Lot: A na-eji aka na-enye aka na akaụntụ ọ bụla
Onu ogugu percent: Onu ogugu nke onu ogugu ahia di na nnabata nnabata ka eji aka gi nye aka.
Njiri site na Balance: Njirimara Onwe nke na-akpaghị aka na-atụle pasent nke itule na akaụntụ nke ọ bụla na akaụntụ nnabata, site n'ime otú a na-ekesa olu e debere na akaụntụ nnabata ahụ na akaụntụ niile dị na ya.
Oke site na ego nha: Njirimara onwe nke na-akpaghị aka na-atụle pasent nke nha nhata na akaụntụ nke ọ bụla na akaụntụ nnabata ahụ, site n'ime otú a na-ekesa olu e debere na akaụntụ nnabata ahụ na akaụntụ niile dị na ya.
Onu ogugu iri: Na njirimara a, Onye njikwa akaụntụ na-akọwa% nke nha nhata nke a ga-eji kwa ahia, ebe a na-eji X% eme ihe maka ntinye ọ bụla.
Akaụntụ maka ntinye Unlimited
Otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu na MT4 bụ ikike ịzụ ahịa ozugbo site na chaatị. Nke ahụ na-eburu na MAM software, n'ihi ya ị nwere ike ịzụta ọtụtụ akaụntụ na atụmatụ ịmepụta chaatị.
FXCC Multi Account Manager bụ na njedebe nke teknụzụ maka iji ọtụtụ akaụntụ. Ndepụta atụmatụ dị oke mma ma ọ ga-eme ka njikwa nke ọtụtụ akaụntụ azụmaahịa azụmaahịa.
Biko rụba ama: Ngwa MAM bụ ngwa nke atọ. Okwesiri oru ma ọ bụ nkwado ọ bụla kwesịrị ịkwado MetaFX.